05/10/2018 - Page 3 sur 3 -
Seranan-tsambon’i Toamasina : Efa mandeha ny asa fanitarana
05/10/2018 admintriatra 0
Tafiditra indrindra amin’ny tetikasa fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara ny tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Araka ny efa fantatra, tetikasa goavana hiarahan’ny Fanjakana malagasy sy ny Fanjakana japoney izany. Raha ny fanazavana, mitentina hatrany amin’ny 639 …Tohiny
Raharaha ny zava-mitranga eto amin’ny firenena, andro vitsy hiatombohan’ny fampielezan-kevitra. Nanome fe-potoana 24 ora ny HCC sy ny Ceni ary ny fitondram-panjakana, ireo kandidà miisa 22. Antony dia ny tokony hanokafana ny lisi-pifidianana sy hampahafantarana …Tohiny
Efa eny anivon’ny antenimiera roa tonta izao ny lalàn’ny fifidianana, izay efa nandrandrain’ ny maro ny handaniana azy, indrindra amin’ izao ankatoky ny fifidianana izao. Mazava rahateo ny teny izay nambaran’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier ...Tohiny
Kardinaly Tsarahazana Désiré : Nisaotra ny Filoha Rajaonarimampianina Hery mivady
Trafikana andramena : Voasambotra ny tompon’ny sambo « Paprika »